सुरक्षित लाइन VPN सर्भर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ - के गर्ने? | मोबाइल फोरम
SecureLine VPN सर्भर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ - के गर्ने?
डेनियल टेरासा | 19/09/2021 09:00 | इन्टरनेट
अवास्ट SecureLine VPN एक अनुप्रयोग हो कि हामीलाई सुरक्षित सर्वरहरु को माध्यम बाट इन्टरनेट मा जडान गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यो सुरक्षा ग्यारेन्टी एक ईन्क्रिप्टेड सुरंग को उपयोग मा आधारित छ कि अवरुद्ध हुन बाट हाम्रो अनलाइन गतिविधि रोक्छ। जे होस्, कहिले काहिँ हामी हाम्रो स्क्रीन मा एक परेशान सन्देश भर आउँछ: "SecureLine VPN सर्वर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ".
यसको मतलब के हो? हामीले के गर्नुपर्छ? यी मुख्य प्रश्नहरु छन् कि हामी यस पोष्ट मा सामना गर्न जाँदैछौं।
1 Avast SecureLine VPN को लाभ
2 तपाइँको Avast सदस्यता संग समस्याहरु लाई हल गर्नुहोस्
3 कन्फिगरेसन समस्या समाधान गर्नुहोस्
4 लाइसेन्स अस्वीकृत?
5 अन्य समाधानहरू
5.1 जडान जाँच गर्नुहोस्
5.2 फायरवाल अक्षम गर्नुहोस्
5.3 जाँच गर्नुहोस् कि कुनै अन्य VPN प्रयोग गरीरहेको छैन
5.4 Avast SecureLine VPN को स्थापना रद्द र पुन: स्थापना गर्नुहोस्
Avast SecureLine VPN को लाभ
यस अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त लोकप्रियता धेरै हद सम्म यसको कुनै पनी समय र संग कुनै पनि स्थान बाट उपयोग गर्न को लागी यसको क्षमता को कारण हो सुरक्षा र गोपनीयता को एक उच्च डिग्री। यो विशेष गरी एक असुरक्षित वा सार्वजनिक वायरलेस नेटवर्क को लागी कनेक्शन को लागी सिफारिश गरीएको छ।
एक सारांश को रूप मा, हामी निम्नानुसार Avast SecureLine VPN को मुख्य फाइदाहरु सूचीबद्ध गर्न सक्छौं:
असीमित इन्टरनेट पहुँच: अर्को स्थान मा एक VPN सर्वर संग जोडेर, हामी स्वतन्त्र रूप मा ब्राउज गर्न को लागी, सामग्री को सबै प्रकार को उपयोग गर्न को लागी, हामी देशहरुमा जहाँ इन्टरनेट सेन्सरशिप फिल्टर लागू गरीएको छ सक्षम हुनेछौं।
गुमनाम गुमनाम। जबकि सामान्य ब्रॉडब्यान्ड जडान मा जो जो कनेक्ट को आईपी ठेगाना पत्ता लगाउन सकिन्छ, एक VPN जडान संग हामी सधैं एक पुरा तरिकाले बेनामी ब्राउजि session सत्र को आनन्द लिनेछौं।
सुरक्षा र सुरक्षा: Cybercriminals नियमित रूप मा "माछा" इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु जो सार्वजनिक नेटवर्क को उपयोग को गोप्य डाटा को लागी सेट। महत्वपूर्ण जानकारी, पासवर्डहरु लगइन प्रमाण पत्र बाट। यो जोखिम व्यावहारिक रूप बाट एक ईन्क्रिप्टेड VPN जडान को उपयोग गरेर शून्य मा कम गरीएको छ।
यो लि detail्क विस्तार मा बताउँछ कि कसरी डाउनलोड र आवेदन को स्थापना गर्न को लागी, यो कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी सबै भन्दा साधारण शंकाहरु लाई हल गर्न को लागी: Avast SecureLine VPN - सामान्य प्रश्न.
जे होस्, जब हामी सन्देश "SecureLine VPN सर्भर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरीयो" भर मा आउँछ माथिका सबै लाभहरु अब हाम्रो पकड भित्र रहेनन्। यो हुन्छ किनभने सुरक्षित लाइन VPN सर्वर प्रयोगकर्ताहरु को रूप मा हाम्रो लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गर्दछ। यो एक को बारे मा छ सक्रियता त्रुटि धेरै बारम्बार। सौभाग्य देखि त्यहाँ यसलाई ठीक गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्।
तपाइँको Avast सदस्यता संग समस्याहरु लाई हल गर्नुहोस्
धेरै पटक SecureLine VPN सर्वर पहुँच समस्याहरु यो जस्तै एक स्पष्ट र सरल कारण को लागी हुन्छ। सदस्यता समाप्त भएको छ र नवीकरण गर्न को लागी आवश्यक छ। धेरै अवसरहरुमा यो हुन्छ कि सदस्यता सक्रिय छ, तर केहि कारण को लागी आवेदन यो पहिचान गर्दैन। यदि हो भने, यो हामीले के गर्नु पर्छ:
सबै भन्दा पहिले, हामी प्रमाणित गर्नेछौं कि हाम्रो अवास्ट खाता सदस्यता सक्रिय छ।
यदि सन्देश अझै पनी माथिको जाँच प्रदर्शन पछि देखा पर्दछ, समस्या केहि अरु हुन सक्छ: सदस्यता सकियो, तर आवेदन सक्रिय छैन। तपाइँ के गर्नु हुन्छ तब मुद्दा को समाधान गर्न को लागी तपाइँको Avast खाता मा तपाइँको सदस्यता लाई जोड्नु हो। तपाइँ यो कसरी गर्नुहुन्छ? यो हाम्रो खाता प्रयोगकर्ता प्रोफाइल मा जाने को लागी पर्याप्त छ, र ईमेल को प्रबन्ध गर्न को लागी, किनेको सदस्यता संग सम्बन्धित ईमेल जोड्नुहोस्। हामी एक प्राप्त गर्नेछौं सक्रियता कोड कि हामी माथिको छवि मा देखाइएको जस्तै प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
यदि होईन, तार्किक रूपमा यो नविकरण र पुन: सक्रिय हुनेछ। यी पालन गर्न को लागी चरणहरु छन्:
हामी Avast SecureLine VPN प्रतिमा मा डबल क्लिक गर्नुहोस् कि विन्डोज डेस्कटप मा देखिन्छ।
हामी जाँदै छौं "मेनू" पहिले नै "लग - इन".
अर्को हामी परिचय दिन्छौं प्रमाणहरू Avast खाता बाट कि Avast SecureLine VPN खरीद गर्न को लागी प्रयोग गरीएको ईमेल ठेगाना संग जोडिएको छ। त्यसपछि हामी फेरि थिच्नुहोस् "लग - इन".
अन्तिम चरण सबै उत्पादनहरु छान्नु हो avast कि हामी सक्रिय गर्न चाहन्छौं र अन्तमा हामी क्लिक गर्नेछौं "सक्रिय र स्थापना गर्नुहोस्"। स्थापना प्रक्रिया स्वचालित रूपमा हुनेछ।
यदि, यी कार्यहरु प्रदर्शन पछि, त्रुटि बनी रहन्छ, यो को सहारा को लागी आवश्यक हुनेछ Avast समर्थन टीम बाट मद्दत।
कन्फिगरेसन समस्या समाधान गर्नुहोस्
अर्को कारण हो कि यो त्रुटि को लागी नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिगरेसन विफलता को केहि प्रकार हो। यो तब हुन्छ जब त्यहाँ एक समस्या छ डोमेन नाम सेवा (DNS) विन्यास। यसलाई समाधान गर्ने तरिका सीधै अपरेटि system्ग सिस्टम संग जोडिएको छ कि हामी हाम्रो कम्प्यूटर मा स्थापित छ। विन्डोज १० र विन्डोज 10 को मामला मा, पालन गर्न को लागी विधि निम्नानुसार छ:
पहिले हामी प्रशासक को रूप मा विन्डोज मा लग इन गर्नुहोस्।
त्यसोभए हामी विन्डोज कुञ्जी थिच्छौं वा हामी विन्डोज स्टार्ट मेनूमा पहुँच गर्न को लागी पहुँच गर्दछौं कन्फिगरेसन विकल्पहरू.
यो मेनु मा, हामी विकल्प छान्नुहोस् "इन्टरनेट नेटवर्क", जहाँ हामी नेटवर्क कन्फिगरेसन र एडेप्टर विकल्पहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी अगाडि बढ्नेछौं।
En "नेटवर्क जडानहरू", हामी दायाँ माउस बटन को साथ मा जडान को प्रकार को लागी उपयुक्त छ कि हामी प्रयोग गरीरहेका छौं मा क्लिक गर्नुहोस्। यस प्रकार, हामी को विन्डो पहुँच हुनेछ "गुण"। (हामी पप-अप विन्डो अनुरोध अनुरोध देख्न सक्छौं। यदि हो भने, हामी जारी राख्न "स्वीकार" मा क्लिक गर्नेछौं)।
अर्को चरण को विकल्प छान्नु हो "इन्टरनेट प्रोटोकल संस्करण4(TCP / IPv4)" र "गुण" बटन थिच्नुहोस्।
यहाँ सम्भावनाहरु को एक श्रृंखला खोलिएको छ (सिस्को OpenDNS, Google सार्वजनिक DNS, Cloudflare 1.1.1.1।, Quad9)। हामी मात्र उनीहरु मध्ये एक छान्नुहोस् र DNS ठेगानाहरु प्रयोग गरीन्छन्। अर्को। यस पछि, हामी प्रेस परिवर्तन स्वीकार गर्न को लागी बचत गर्नुहोस्। (सायद यस बिन्दु मा एक "नेटवर्क निदान" विन्डो देखा पर्नेछ, जुन हामी अस्वीकार गर्न को लागी)।
प्रक्रिया को अन्तिम खण्ड मा हामी को सुरु कुञ्जीहरु थिच्नुहोस् विन्डोज + आर एकै साथ। एउटा विन्डो देखा पर्नेछ जहाँ हामी लेख्नेछौं cmd र हामी «ठीक» बटन मा क्लिक गरेर मान्य हुनेछ।
अन्तमा, कमाण्ड प्रम्प्ट विन्डो देखा पर्नेछ जहाँ हामी निम्न कोड सम्मिलित गर्न को लागी हुनेछ: ipconfig / flushdns। अन्तिम कार्य मात्र प्रविष्ट बटन मा क्लिक गर्न को लागी हुनेछ ताकि परिवर्तनहरु लाई बचाईन्छ। यी अन्तिम दुई कार्यहरु माथिको छवि संग मेल खान्छ।
"SecureLine VPN सर्वर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ"
त्यहाँ अझै पनी अर्को सम्भावना छ कि "SecureLine VPN सर्वर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरीएको छ" सन्देश लाई व्याख्या गर्दछ। बारेमा सबैभन्दा शाब्दिक व्याख्या उस्तै को। यस मामला मा, हामी बाहिर अन्य कारणहरु को लागी हेर्नु हुँदैन: हाम्रो लाइसेन्स अस्वीकृत भएको छ।
यो केहि धेरै विशिष्ट परिस्थितिहरुमा हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि प्रयोगकर्ताले केहि नियमहरु को उल्लted्घन गरेको छ कि अवास्ट संग हस्ताक्षर सम्झौता मा बाहिर सेट गरीएको छ। कहिलेकाहीँ यो केहि अनैच्छिक हो, किनकि शायद ही कसैले पनी सामान्यतया यी सर्तहरु को ठीक प्रिन्ट पढ्छन्, हामी मात्र हेरेर वा विवरण मा ध्यान दिए बिना स्वीकार गर्दछौं।
अझै, हामी समस्या समाधान गर्न विकल्प छ। यो गर्न को लागी, तपाइँ ईमेल द्वारा Avast को समर्थन सेवा लाई सम्पर्क गर्नु पर्छ, स्थिति बताउनुहोस् र तपाइँको खाता पुन: सक्रिय गर्न को लागी प्रदान गरिएका निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्।
कहिले काहिँ आनन्दित "SecureLine VPN सर्वर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ" त्रुटि सन्देश तुच्छ कारणहरु द्वारा ट्रिगर गर्न सकिन्छ। ठीक यही कारणले गर्दा यो सजिलो छ कि हामी उनीहरुलाई नजरअन्दाज गर्न को लागी। यो कुनै पनि अवस्थामा यी संग प्रयास गर्न लायक छ सरल समाधान हामी धेरै जटिल विधिहरु मा जानु भन्दा पहिले। यहाँ ती मध्ये केहि छन्:
जडान जाँच गर्नुहोस्
हो यो यस्तै हो। खराब जडान गुण नकारात्मक एक VPN संग जडान प्रक्रिया लाई प्रभावित गर्न सक्छ। नेटवर्क जाँच गर्न को लागी हामी निम्न गर्नेछौं:
हामी जाँदै छौं "सुरु" र हामी यसको विकल्प चयन गर्दछौं "सेटिंग".
त्यसपछि हामी विकल्प छान्नुहोस् "नेटवर्क र इन्टरनेट".
En "उन्नत नेटवर्क सेटिंग्स" हामी विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस् "नेटवर्क समस्या निवारक।"
त्यसोभए हामी एडाप्टर छान्छौं कि हामी जाँच्न र प्रेस गर्न चाहन्छौं "अर्को".
यस तरीकाले हामी पुष्टिकरण प्राप्त गर्दछौं कि त्यहाँ नेटवर्क संग एक समस्या छ। यदि यसको सट्टा जवाफ सकारात्मक छ, हामी यस्तो सम्भावनालाई इन्कार गर्नेछौं।
फायरवाल अक्षम गर्नुहोस्
साथै फायरवाल वा फायरवाल VPN को जडान मा हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तव मा, यो कहिले काँही पनी कनेक्शन ब्लक गर्न सक्छ। यस वरपर तरीका फायरवाल को बहिष्करण सूची मा यो जडान थप्न को लागी हो।
मूल समस्या को अन्त गर्न को लागी सबैभन्दा सीधा छ फायरवाल अक्षम गर्नुहोस्। जे होस्, यो एक अत्यधिक सिफारिश गरिएको विचार हैन, किनकि यसो गरेर हामी कम्प्यूटर को रक्षा र भाइरस को आक्रमण को लागी उजागर छोड्नेछौं। एक मध्यवर्ती समाधान यो क्षणिक रूपमा अक्षम गर्न को लागी हुन सक्छ:
हामी जाँदै छौं "नियन्त्रण प्यानेल" र हामी चयन गर्दछौं "सुरक्षा प्रणाली".
त्यसपछि हामी मा क्लिक गर्नुहोस् "विन्डोज डिफेन्डर फायरवाल" र दुबै सार्वजनिक र निजी नेटवर्क को लागी सक्रिय / निष्क्रिय बटन थिच्नुहोस्।
अन्तमा हामी क्लिक गर्दछौं "स्वीकार गर्न".
जाँच गर्नुहोस् कि कुनै अन्य VPN प्रयोग गरीरहेको छैन
यो अर्को सम्भावना हो कि बेतुका लाग्छ, तर त्यो कहिले काहिँ यो त्रुटि को स्रोत हुन सक्छ। यदि हामीसँग अर्को VPN हाम्रो कम्प्यूटर मा स्थापित छ, यो धेरै सम्भावना छ कि एक विवाद जो कनेक्शन समस्या मा परिणाम। तार्किक समाधान VPN लाई अक्षम गर्न को लागी हो कि हामी प्रयोग गर्न र ती मध्ये एक मात्र प्रयोग गर्न चाहँदैनौं।
Avast SecureLine VPN को स्थापना रद्द र पुन: स्थापना गर्नुहोस्
सफा र सफा। धेरै पटक सफ्टवेयर पुन: स्थापना गर्नुहोस् यो यस प्रकार को समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी सरल र सबैभन्दा सीधा समाधान हो। कार्यक्रम को स्थापना रद्द गरेर र यसलाई पुन: स्थापना गरेर, हामी यसको अपडेटेड संस्करण को उपयोग गर्दछौं, जो सधैं अधिक कुशल हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » SecureLine VPN सर्भर तपाइँको लाइसेन्स फाइल अस्वीकार गरेको छ - के गर्ने?
TikTok मा कति शुल्क लाग्छ? धेरै प्रभावकारीहरूले यसलाई प्रकट गर्छन्
कसरी विन्डोज त्रुटि 0x800704ec फिक्स गर्ने